မာရ်နတ် ကောင်းသွားပြီလော.. U-turn | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » မာရ်နတ် ကောင်းသွားပြီလော.. U-turn
မာရ်နတ် ကောင်းသွားပြီလော.. U-turn
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 21, 2011 in Buddhism, Community & Society, Drama, Essays.., Opinions & Discussion | 8 comments
မာရ်နတ် ဘုရားရှင်အား နှောက်ယှက်စဉ်
တလောက အင်တာနက်ဆိုက်တခုမှာ မာရ်နတ်အကြောင်း မေးတာတွေ့လို့ မာရ်နတ်သည် နတ်ကောင်းလား၊ နတ်ဆိုးလားဆိုတာ ရှာဖွေစပ်စုမိပါတယ်။ နတ်ခြင်းတူမတူ မသိပေမဲ့ မာရ်နတ်လိုမျိုး အစွမ်းဆုံး နတ်ဆိုးမျိုးသည် ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန်လိုစေတန်၊ မွတ်စလင်မှာရှိုက်တန်၊ အခြားဘာသာတွေမှာလည်း နာမည်တမျိုးမျိုးနဲ့ ရှိပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ဝါဒီများကတော့ ဆိုးသွမ်းတဲ့စိတ်လို့ ဆိုမယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ ဒီပို့စ်မှာဘေးမဲ့ လွှတ်ထားပါတယ်။
မှတ်မိသလောက် မာရ်နတ်သည် နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်မှာ အပေါ်ဆုံးနတ်ပြည်က (နာမည်မေ့) နတ်သားပါ။ အဲဒီနတ်တွေက ဘယ်လောက်စွမ်းသလဲဆို ရထားတဲ့ စည်းစိမ်ခံစားမှုတွေအပြင် မိမိ အလိုရှိရာကို တောင့်တလိုက်ရုံမျှနဲ့ ပြည်စုံပါတယ်။ ဖန်ဆင်းဖို့တောင် မလိုတော့တဲ့သဘောပါ။ (သူ့ထက်နိမ့်တဲ့ နတ်တမျိုးက လိုရာပြည့်စုံဖို့ ဖန်ဆင်းရသေးတယ်၊ ကျန်အောက်ဖက် လေးထပ်က နတ်တွေကတော့ ရှိထားတဲ့စည်းစိမ်ကိုပဲ စံစားရပါတယ်။ အကြမ်းမျဉ်း နားလည်ထားတာပါ)။
အမေးပုစ္ဆာမှာ အသောကမင်းကြီးရဲ့ တတိယ သံဃာယနာတင်ပွဲကို နှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ မာရ်နတ်ကို ရှင်ဥပဂုတ္တမထေရ်က ဆုံးမလိုက်လို့ နောင်တရပြီး ဘုရားဆုပန် ဗုဒ္ဓဝါဒီဖြစ်သွားတယ်လို့ မဟာယန ကျမ်းစာမှာဆိုပါတယ်။ ထေရဝါဒ အယူကတော့ ရှင်ဥပဂုတ် ဆိုတာကိုတောင် လက်မခံဘူး။ ဒါပေမဲ့ အတော်များများ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ရန်ကုန် တရုတ်တန်းမှာဆို နှစ်တိုင်း ရှင်ဥပဂ္ဂုတ် ပူဇော်ပွဲဆိုတာရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြစ်ထဲ ဆီမီးဖောင်တော်နဲ့ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ပူဇော်ကြပါတယ်။ တရုတ် ပရိတ်သတ် အလွန်များတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ကြုံလို့ပြောရရင် ရေနဲ့ပတ်သက်စီးပွားရှာသူများ ပင်လယ်ထဲ ဒုက္ခတွေ့ရင် ကြေးပြသာဒ်နဲ့ သီတင်းသုံးတဲ့ ရှင်ဥပဂုတ်ကိုယ်တော်ကိုဖူးရပြီး ဘေးလွတ်တာ အပြောများပါတယ်။ ရဟန္တာလို့လည်း ဆိုထားပြန်တော့ သက်တော်ထင်ရှား ကိုယ်ယောင်ပြတာထက် သူ့အဓိဌာန်သဘော၊ အကြွင်းအကျန် ဝေနေယျများ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။
စွန်းလွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ထေရုပတ္တိမှာ မထ္ထီလာရေလယ်ဆရာတော်နှင့် တရားဓမ္မ ဆွေးနွေးစဉ် အသံနဲ့လာပြီး အာယုသင်္ခလွှတ်ခိုင်းတော့ ဆရာတော်ကငြင်းပြီး မေတ္တာပို့လိုက်လို့ လက်လျော့သွားပါတယ်။ လိုက်ကြည့်တော့ မာရ်နတ်ရဲ့အခြွေအရံပါ၊ မာရ်နတ်က သူတော်ကောင်းကြီး လို့ပြောပါတယ်။ http://www.dhammaransi.net/ebooks4/SunlunVippassana6.pdf စာမျက်နှာ ၄၉တွင်အကျယ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာတပိုဒ်မှာ မာရ်နတ်သည် နယ်နယ်ရရမဟုတ်၊ ဘုရားလောင်း လူမဖြစ်တဲ့ ကာလမှာ သတ္တဝါများအကျိုးကို သူမတူအောင် ဘဝပေါင်းများစွာ ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်။ ဘုရားနဲ့မာရ်နတ် တို့ဘဝသင်္ချေဖြစ်ခဲ့ကြပေမဲ့ ဆုံခဲ့ကြတာ အနဲအကျဉ်းမျှလို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘာလို့ဖွရသလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ ထေရဝါဒမှာ လုံးဝအသိမှတ်မပြုပေမဲ့ မဟာယနဝါဒအရ သာသနာ့သမိုင်းဝင် ရဟန္တာမြတ်ကြီးတပါးနဲ့ ဒီဖက်ခေတ် ထေရဝါဒ မီးရှုးတန်ဆောင် ရဟန္တာကြီးတပါး ဆက်နွယ်မှုကနေ ရှေ့ဆက်အတွေး နယ်ချဲ့နိုင်အောင်လို့ပါ။ ဆက်စပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မဟာယန ကျမ်းစာများကနေ ကျနော်တို့ လှစ်ဟာနေတာတွေကို တွေ့ကောင်းတွေ့ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနေရာနဲ့ တနေရာ ပိုမိုကူးသန်းဆက်ဆံလာတဲ့ ၂၁ရာစု အနာဂတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းများအကြား အချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှုသည် ခေတ်သစ်တခုဆီသို့ ရောက်တော့မည်မှာ မဝေးတော့ကြောင်း ကြိုတင်နမိတ် ဖတ်ရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ။
ကိုကြောင်ကြီး ပို့ ကိုဖတ်ပြီးမာရ်နတ်အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလါတယ် လေ့လာအုံးမှ ကျေးဇူးဘဲ ကိုကြောင်ကြီးရေ…
ကြောင်ကြီး နမိတ်ဖတ်တဲ့ ပရောဟိတ် အနေနဲ့လုပ်စားတော့မဲ့ပုံပဲ။
………”ဘာလို့ဖွရသလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ ထေရဝါဒမှာ(ကျွန်တော်တို့ထေရ၀ါဒ ??? ဒါဆို သူတို့မဟာယန ဆိုတဲ့ သဘောလား ??? ) လုံးဝအသိမှတ်မပြုပေမဲ့ မဟာယနဝါဒအရ သာသနာ့သမိုင်းဝင် ရဟန္တာမြတ်ကြီးတပါးနဲ့ ဒီဖက်ခေတ် ထေရဝါဒ မီးရှုးတန်ဆောင် ရဟန္တာကြီးတပါး (မြတ်စွာဘုရား သာသနာတော်ထဲမှာ ကိုးကွယ်စရာ မထင်မရှားနောက်တပါးကို အသက်သွင်းမယ်ပေါ့?? သူများခြံက မြက်က ပိုစိမ်းနေတာလား ???) ဆက်နွယ်မှုကနေ ရှေ့ဆက်အတွေး နယ်ချဲ့နိုင်အောင်လို့ပါ။ ဆက်စပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မဟာယန ကျမ်းစာများကနေ ကျနော်တို့ လှစ်ဟာနေတာတွေကို (ကျွန်တော်တို့လှစ်ဟာနေတာတွေ ဆိုတာဟာ ခင်ဗျား လှစ်ဟာ နေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထေရ၀ါဒ အစစ်ဟာ လှစ်ဟာနေတာတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့သံသယရှိပြီး တခြား အသစ်တွေ ထပ်ဖြည့်ချင်ရင် ခင်ဗျားဟာ ………. ???) တွေ့ကောင်းတွေ့ နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တနေရာနဲ့ တနေရာ ပိုမိုကူးသန်းဆက်ဆံလာတဲ့ ၂၁ရာစု အနာဂတ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းများအကြား အချင်းချင်း ကူးလူးဆက်ဆံမှုသည် ခေတ်သစ်တခုဆီသို့ ရောက်တော့မည်မှာ မဝေးတော့ကြောင်း ကြိုတင်နမိတ် ဖတ်ရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါရစေ။ (ကင်ချင်လိုက်တာ…ကလိကလိနဲ့ )
ဦးကြောင်ကြီးက မာန်နတ်ဆိုတာ ဘုရားကို ရန်လုပ်ပြီး ပုလ္လင်လုတဲ့ နတ်လို့ဘဲ မြင်တာကိုးးးး
ဟစ်တလာ နာဇီ ဂျာမနီ က လူဆိုးကြီးလို့ လူတွေ သိပေမဲ့ လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်တယ် ဆိုရင် ဟစ်တလာဘဲ ပြေးမြင်နေတာကိုးးးးး
ကမ္ဘာမှာ တခြား လူတွေ အများကြီး ရှိတယ်လေ။ နာမည်ကြီးတဲ့ လူဆိုးနဲ့ နာမည် မထင် မရှားဖြစ်ပြီး ဆိုးနေတဲ့ လူဆိုး ကွာသလိုပေါ့ကွယ်။
ပေတံ တခုနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရပါဘူး လူလောက အမြင်တွေနဲ့ လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး တွေးမှ ပိုပြီး အဆင်ပြေလိမ့်မယ် ယူဆတယ်။
ရှင်ဥပဂုတ္တ ကို ထေရ၀ါဒမှာဘဲ ရှာရှာ မဟာရယန မှာဘဲ ရှာရှာ ရဟန္တာဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကန်တော့မှတော့ ရဟန္တာ ကန်တော့တဲ့ တန်ရာတန်ကြေး ကုသိုလ်တော့ ရမှာဘဲလေ။
ထေရ၀ါဒ ရဟန်းတွေ ထဲမှာလည်း ရှင်ဥပဂုတ္တဆိုတဲ့ နာမည် ပိုင်ဆိုင်ပြီး ရဟန်း ကိစ္စပြီးသွားတဲ့ ရဟန်းကော မရှိနိုင်ဘူးလား။ စိတ်ကူးယဉ် မဆန်ဘဲ လက်တွေ့ဆန်ဆန် အတွေးနဲ့ တွေးလိုက်ပါ။ စိတ်ထားတတ်ရင် ကုသိုလ်ရတယ် ဦးလေးရေ..
သတောင်းစားတောင် ဘုရင်ကို ရဟန်း အယောင်ဆောင် ဆွမ်းခံပြီး အမတ်တွေက သတောင်းစား ညာတာ ပြောရင် ဘုရင် စိတ်ညစ်မှာ သတ်မှာ စိုးလို့ လမ်းတ၀က်မှာ ကြည့်ရင်းနဲ့ ရဟန်းအသွင် ပျောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အသုံးနဲ့ ပြန်လျောက်လို့ ဘုရင်က ငါလှူလိုက်တာ ရဟန္တာ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ပီတိပွားလိုက်တာ ဘယ်လို ကုသိုလ်တွေ ရတယ် ဆိုတာတွေ သိမှာပေါ့။
မိန့် တာကို နှစ်သက်မိတယ် ဘာတဲ့
ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ မာန်မာန မာန်စိတ်ကို အောင်နိုင်ဘို့ ကြိုးစားဆိုလား ရှိစေပေါ့နော
ရှင်ဒေဝရတ်ကတော့ သူ့ အကြောင်းနဲ့ သူအပြစ်ခံရတာပေါ့လေနော
မာန်နတ်ကြတော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်မှသည် ယနေ့ သာသနာတော်ထိတိုင်
အနှောင့်အယှက် ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကို ဖွင့်ဆိုကြလေတော့
အဲ့သည်မာန်နတ်ရဲ့ အကျိုး အပြစ်တွေကို ကျမ်းဂန် အထောက်အထားလေး တစ်ခုလောက်နဲ့ 
မာန်နတ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြားဖူးတာတော့ တခုရှိတယ် မာန်နတ်က အမြင့်ဆုံး နတ်ဘုံက မဟုတ်ဘူး ဆိုလားဘဲ။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆရာတော် တပါး ပြောတာကတော့ သူ့ထက် မြင့်တဲ့ နတ်တွေ ရှိရဲ့သားနဲ့ မာန်နတ်လာတော့ ဘာလို့ နတ်တွေ ထွက်ပြေးတာလဲလို့ လူတွေက မေးကြတယ်။
ဥပမာ နဲ့ ပြောသွားပုံကတော့…
၀က်ကလေး တကောင် လမ်းသလား နေတာ ခြင်္သေ့မြင်လို့ ကိုက်စားမယ် ဆိုပြီး လုပ်တော့ ၀က်က ကြောက်ကြောက်နဲ့ မစင်တွင်းထဲ ခုန်ဆင်းတယ်တဲ့.. မစင်တွင်းထဲ ခုန်ဆင်းတော့ ခြင်္သေ့က မြင်ပေမဲ့ ဆက်မလိုက်ဘဲ ကြည့်နေတယ်။ ဒါကို ၀က်က ငါကို ကြောက်လို့ မလိုက်တော့ဘူး ထင်တယ် ငါထွက်ခြောက်ကြည့်မှဘဲ ဆိုပြီး ၀က်က မစင်တွင်းက ထွက်ပြီး ခြင်္သေ့ဆီ ပြေးသွားရင် ခြင်္သေ့က မကိုက်တဲ့ အပြင် ထွက်ပြေးမှာတဲ့.. ဘာလို့ မလိုက်လဲဆိုရင် ၀က်ကိုယ်မှာ ပေနေတာ မစင်မှန်း သိလို့တဲ့.. အဲဒီလိုဘဲ မာန်နတ်ထက် မြင့်တဲ့ တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တွေက မာန်နတ်လာတော့ ထွက်ပြေးတာ မစင်တွင်းထဲက ပြေးတက်လာတဲ့ ၀က်လိုမျိုး.. ကြောက်လို့ မဟုတ်ဘူး ရွံ့လို့တဲ့။ အဲဒီလို ရှင်းပြတာ တခါကြားဘူးပါ၏။
ဆေတန်က… ဘုရားသခင်ထက်စွမ်းသလိုဖြစ်နေတာမို့ .. သူ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်..။
မာန်နတ် ကောင်းသွားပီလား ဘာလားတော့ မသိဘူး …..
ကောင်းသွားပီဆိုလဲ ၀မ်းသာရတာပေါ့ ….
ကွီးကြားဖူးတာကတော့ …. မာန်နတ်က မနာလိုမှုကစတာတဲ့ဗျ။
သူကနတ်ဘုံက။ ကိုယ်လိုချင်တာအကုန်လုံး သူများကသိပီး အလိုက်သင့်ဖန်းဆင်းပေးနိင်တဲ့ ဘုံကဆိုပဲ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင်ဖန်ဆင်းစရာမလိုဘူး … အဆင့်မြင့်တရ်နော်။
နတ်ဘုံရောက်ကြတရ်ဆိုတာကလဲ သူတော်ကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ အလှုအတန်းအားကောင်းရင်လဲရောက်တာပဲ။
သူ … ဘုရားရှင်ကို လိုက်နှောင့်ယှက်ရတဲ့ အကြောင်းက
သူဘုရားဖြစ်တဲ့အခါ ချေချွတ်ဖို. ဝေနေယတွေ ကုန်မှာစိုးလို.တဲ့ဗျား။
ကောင်းတာ ဆိုးတာကတော့ လူတစ်ကိုယ်ထဲမှာတောင်ရှိနိုင်တာပဲဗျ ။ဆရာကျော်လှိုင်ဦးဘာသာပြန်တဲ့ ဒေါက်တာဂျက်ကီးနဲ့ မစ္စတာ ဟိုက် ကိုရှာဖတ်ကြည့်ပါ့လား?